Dowladda Soomaaliya oo ciidammo amniga suga geystay Magaalada Marka |
Dowladda Soomaaliya oo ciidammo amniga suga geystay Magaalada Marka
buy Erectalis, online Zoloft. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidammo isugu jira booliis iyo nabadsugid geystay degmada Marko ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaa oo toddobaadkii hore ay ku dagaalameen malleeshiyo beeleedyo iska soo horjeeda.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, C/qaadir Nuur Siidii ayaa VOA-da u sheegay xaaladda degmada Marka ay soo hagaagayso, isla markaana ay dhinacyadii dagaalamay u billowdeen wadahadallo.
“Ciidamo isugu jira booliis iyo nabadsugid ayaa la geeyay degmada Marko, waxaana tani ay qayb ka tahay qorshaha nabadda lagu xasilinayo. Ciidamadan tiradoodu waa boqolaal askari, rajo wanaagsan ayaana ka qabaa in colaadda la joojiyo,” ayuu yiri C/qaadir Siidii.
Sidoo kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in wadahadallada billowday ay rajo weyn ka qabaan inay guul kusoo dhammaadaan, balse dadka daggan Marka ayaa iyagu soo sheegaya in weli magaalada ay joogto malleeshiyadii qabsatay, halka dhinicii kalena uu ka maqan yahay.
Magaalada Marko ayaa waxaa ka socda qorshayaal lagu doonayo in malleeshiyadii la waregay toddobaadkii hore laga saaro magaaladaas, isla markaana ay amniga guud ee degmada la wareegaan ciidamada ay geystay dowladda Soomaaliay.
Gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa ku sugan wafdi ka socda dowladda Somalia oo uu horkacayo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka C/llaahi Goodax Barre, iyadoo wafdigan ay isku dayayaan inay xal waara ka gaaraan colaadda gobolkaas ka taagan.
Colaadda gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay saameyn xooggan ku yeelatay isku socodka dadka iyo ganacsiga degmooyin iyo deegaanno ka tirsan gobolkaas, iyadoo dagaalladan ay dhowr jeer soo laalaabteen.